Twitter na-anwale ọnọdụ abalị na ụdị mkpụrụedemede | Gam akporosis
Twitter abụwo na-arụsi ọrụ ike n'oge na-adịbeghị anya ya na otutu akwukwo ndi mara nma dika enweghi foto na njikọ n'ime agwa agwa, bọtịnụ ọhụrụ maka malite Periscope site na ngwa ahụ n'onwe ya ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ndozi ya gburugburu imewe ka mma ijikọta asụsụ eji eme ihe Ngwa.
Ọ bụ ezie na anyị ahụla na gam akporo N na Nova Launcher etinyela ọnọdụ abalị dị ka nhọrọ maka ndị ọrụ chọrọ mgbe anyanwụ dara, isiokwu gbara ọchịchịrị saa anya nke usoro na ngwa ya launcher, ọ bụ ugbu a Twitter ka ọ gbanwere ọnọdụ a na ụdị alpha nke ngwa gam akporo ya.
Ọnọdụ abalị nke Twitter na-eme ka ihuenyo ahụ gaa a ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ ndo na font na-acha ọcha, na-agbanye ndabere na-acha ọcha na font na nwa. Ọ bụ ezie na ewepụrụ ọnọdụ ọchịchịrị site na Android N, ọnọdụ abalị ka dị, yabụ Twitter bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ na-abanye n'ụgbọ okporo ígwè nke ihe ọhụrụ a na-atọ ụtọ iji melite ngosipụta nke ihuenyo maka oge ndị ahụ mgbe ọ na-abụghị ya chọrọ ya ọtụtụ ìhè na-abịa site na ihuenyo nke smartphone anyị.
Ọnọdụ abalị na ụdị alpha nke Twitter maka gam akporo na-abịa soro a redesign na taabụ maka usoro iheomume, oge, ozi na ọkwa. Usersfọdụ ndị ọrụ ahụwo akara ngosi hamburger na menu nke na-apụ apụ, ebe ndị ọzọ nwere nke nwere ntụpọ atọ kwụ ọtọ. Nke a na - eme n'ihi na ugbu a, a na - anwale nsụgharị abụọ dị iche iche nke ngwa iji hụ nke ndị ọrụ na - ahọrọ.
Versiondị ọnọdụ abalị nwere nkwarụ na ụdị alpha nke Twitter maka gam akporo na enweghị ike iji aka gị kwụsị ọrụ. Ihe kwesiri igbanwe mgbe etinyere ya na nsụgharị ikpeazu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Twitter na-anwale ọnọdụ abalị na ụdị nke gam akporo